Global Voices teny Malagasy · 8 Novambra 2012
Tantara tamin'ny 08 Novambra 2012
Azia Atsimo08 Novambra 2012
Tamin'ny 11 Febroary 2012, nisy namono tamin'ny fomba feno habibiana tao amin'ny trano nofainy tao andrenivohitra ilay tonian-dahatsoratra tao amin'ny fahitalavitra Maasranga, Sagar Sarwar sy ny vadiny izay mpanao gazety ao amin'ny ATN Bangla, Meherun Runi (Jereo ny lahatsoratra ato amin'ny Global Voices [mg] )। Tamin'izany andro izany, nanambara ny Minisitry ny Atitany...
Taorian'ny nanatrehany fihetsiketsehana goavana indrindra, niantso ho amin'ny hetsika hafa indray ireo tsy fantatra anarana mpikarakara ny “Diaben'ny Fahamendrehana”. An'aliny no tonga tao amin'ny faritr'i Mishref sy Sabah Al-Salem mba hanohitra ny fanovana ny lalàm-pifidianana ataon'ny fitondrana Koesiana, ka kandidà iray sisa no azon'ny olom-pirenena fidiana fa tsy efatra toy ny teo...
Resadresaka Niarahana Tamin'i Rebecca MacKinnon Momba ny Boky Nosoratany ‘Consent Of The Networked’
Hafanàm-po nomerika08 Novambra 2012
Rebecca MacKinnon, mpiara-manorina ny Global Voices, mpanao gazety sy bilaogera manana traikefa nandritra ny taona maro, be hevitra maranitra raha ny lohahevitra tena iantsorohany no jerena, izay amin'ny ankapobeny mikasika ny fahalalahan'ny fiaraha-monina sy ny fahalalahana ao amin'ny aterineto. Tamin'ny Janoary lasa teo, namoaka boky mitondra ny lohateny hoe Consent of the Networked (Fankatoavan'ny mpiserasera) izy,...
Nanambara [ar] i Ejipta androany fa horàrana ny fidirana amin'ny habaka mamohafady. Niadihevitra momba izany tao amin'ny Twitter ny mpiserasera, izay nanombana karazana sivana izay hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny fahalalaham-pitenenana – manokatra varavarana amin'izay ho fanararaotam-pahefana ataon'ny manam-pahefana sy ny fanampenam-bava ny feo ao amin'ny aterineto izany. Mpampianatra momba ny...